Shiinaha MAX warshad iyo shirkado | GOODTONE
Raaxo ma aha caajis laakiin waa aasaaska shaqada hufan. Qof kastaa wuxuu u qalmaa jawi shaqo oo raaxo leh oo bilaash ah Raaxada Jirka ah. Isku darka khadadka siman iyo muuqaalka caadiga ah ayaa bixiya tayadiisa oo kooban.
Ka mid noqoshada Palo Alto Design Group bishii Oktoobar 1995. Chen wuxuu ku kasbaday fulinta iyo maaraynta naqshadeynta Palo iyo Flextronics International.Chen hadda waa Agaasimaha Hal-abuurka ee Shirkadda 'Xcellent Product International' Ka dib markii uu dhammeeyo daraasadda naqshadeynta dheeriga ah ee halka sano ah ee Caalamiga ah ee Elite. oo ay qabteen magaalada Munich, Jarmalka iyo San Francisco, USA, Chen wuxuu cusbooneysiiyay badeecada warshad dhaqameedka isaga iyo kooxdiisa. Isaga oo fikraddiisu tahay "Product VALUE Identity", Chen wuxuu ka caawiyaa shirkadaha soo saarista badeecada, waxay qeexayaan jihada horumarinta wax soo saarka, iyo xaddiga qiimaha suuqa. ee sumadda. Muddo tobanaan sano ah, oo leh ruuxa “Naqshadeynta Farxadda leh”, naqshadeynta Chen waxay daboolaysay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin muuqaalka kombuyuutarka, alaabada Photoelectric, badeecada 3C, alaabada guryaha iyo qalabka guryaha. Aurora, oo ah badeecada ugu iibinta badan. Bishii Abriil 2006 iyo 2007, Chen waxaa lagu casuumay inuu kaqeyb galo Bandhigga Naqshadeynta Naqshadaha Caalamiga ah ee Milan, kooxdiisuna waxay ahayd kooxda kaliya ee si sharaf leh loogu casuumay Taiwan.
Markii la gaadho 2010, Chen wuxuu u qaabeeyay shaqo yaab leh oo aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay Mainland China, HongKong iyo Taiwan. "Nolosha u noolow" macnaheedu waa inaad ku noolaato kuna raaxeysato noloshaada halkii aad ka noolaan lahayd. Shiinaha ayaa ku socota horumar heer sare ah. Dadku uma sii halgamayaan sidii ay ugu noolaan lahaayeen sidii hore. Waxaan rajeyneynaa inaan helno jawi shaqo oo wanaagsan oo raaxo leh. Waxaan isku dayayaa inaan idhaahdo, qaabkan qeexida ah, warshadaha oo dhami waa inay ogaadaan u janjeera, soo saarida alaab dadka ka dhigi karta inay dareemaan diirimaad.Tani waa hadafka aan dhamaanteen u baahanahay inaan ku guuleysano.
Alaabada Abaalmarinta ：
Raaxada Jirka ee Raaxo leh
Isku darka khadadka siman iyo muuqaalka caadiga ah wuxuu siinayaa tayadiisa oo kooban.
Qaab dhismeedka nimcada
Isku-dhafka isku-dhafan ee isku-dhafan ayaa qaabeeya qaabkiisa.
Madaxa la isku hagaajin karo iyo lumbar ayaa si aad ah ugu habboon dhaqdhaqaaqa jidhka bini'aadamka, yaraynta daalka iyo raaxo la'aanta inta lagu jiro maalinta shaqada.
Fikradda Naqshadeynta Cagaaran
Qaab dhismeedka la fududeeyay wuxuu yareeyaa jiilka qashinka.
Inaad ka fikirto, nasato, is dhex gasho.
Naqshadaynta Minimalist waxay jabisaa soohdimaha fikirka, iyadoo abuureysa aragti waxyooneysa
Asal ahaan ka soo jeeda wada hadalka meel bannaan, the
quruxda gudaha waxaa laga dhisay xiriirka barta, qadka iyo dusha.
Alaab Casri ah oo Xafiis ah